सडकसम्म कसरी पुग्छन् बालबालिका ? - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
सडकसम्म कसरी पुग्छन् बालबालिका ?
१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार १४:११
नरेन्द्र महतारा- जब परिवारले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन, तव सडकमा गएर आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न बालबालिकाहरु सडकमा पुग्ने गर्दछन् ।
उनीहरुको मनोविज्ञान नै सडकमा बसेर जीवन निर्वाह गर्ने हुन्छ । यस्तै घरपरिवारमा रेखदेख गर्ने अभिभावकको कमीदेखि अन्य साथीभाइको लहलहैमा लागेर बालबालिकाहरु सडकमा पुग्ने गरेको विभिन्न तथ्यांकहरुले बताएको छ ।
यसअन्तर्गत नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा सडक बालबालिकाहरु भेटिने गरेका छन् । विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाको सडक पेटीमा बालबालिकाहरु भेटिने गरेका छन ।
पारिवारिक समस्या तथा आर्थिक अभावका कारण थुपै्र बालबालिकाहरु सडकमा पुग्ने गरेको अनुसन्धानहरुले बताएको छ । सडक बालबालिकाहरुको अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारले बालबालिका मुक्त सडक अभियान समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यससँगै अहिले सडकमा दुई किसिमका बालबालिकाहरु भेटिने गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।
२०७३ साल बैशाख महिनादेखि २०७९ बैशाख मसान्तसम्म १ हजार ९ सय २३ जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ । जसमा बालक १ हजार ६ सय ५० रहेका छन् भने २ सय ७३ बालिका रहेका छन् ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को साउनदेखि २०७९ को बैशाख मसान्तसम्म उद्धार गरिएका बालबालिकाको संख्या १ सय ३५ रहेको छ । त्यसमध्ये १ सय १३ बालक र २२ जना बालिका रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका लगायत चितवन, कास्की, सुनसरी, झापा, रुपन्देही, सुर्खेत र काभ्रे लगायतका जिल्लाहरुमा सडक बालबालिका भेटिने गरेका छन् । यसरी सडकमा अलपत्र बालबालिकालाई सरकारले बालबालिका मुक्त सडक अभियान अन्र्तगत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
घरपरिवारको उचित रेखदेख नहुँदा साथीभाइको लहलहैमा लागेर बालबालिका सडकमा पुग्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थाबाट बालबालिकालाई जोगाउन अभिभावक स्वयम सचेत हुन जरुरी छ ।